Wasaaradda caddaalada Puntland oo doonaysa in ay dib u fiiriso madaarista Qur’aanka – Kalfadhi
Wasaaradda caddaalada Puntland oo doonaysa in ay dib u fiiriso madaarista Qur’aanka
February 20, 2019 Cabdiraxmaan Maxamed
Wasiirka cusub ee wasaarada caddaalada Puntland Cawil Sheikh Xaamud oo dhowaan xafiiska la wareegay ayaa sheegay in uu xoogga saari doono nidaaminta madaarista lagu barto Qur’aanka iyo diiwaangelintooda.
Qorshahan waxaa qayb ka ah in dabagal lagu sameeyo dugsiyada Qur’aanka si loo hubiyo tayada iyo aqoonta ay gudbinayaan.
Wasiirka oo muujiyay in uu jiro habac waxbarineed iyo kororka dugsiyada Qur’aanka iyo tayadooda ayaa sheegay in furnaanayn dugsi Qur’aan oo ruqsad la’aan ah. Arrintan ayaa xoogga saaraysa magaalooyinka weyn iyo degmooyinka Puntland.
Dugsiyada Qur’aanka ee Puntland waxaa gacanta ku haya culimada diinta. Dhawr jeer oo hore wasaarada caddaaladu sheegtay in ay dib u eegis ku samaynayso hannaanka waxbaridda aqoonta madaarista lagu barto Qur’aanka.
Akhriso:-Maxeey Baarlamaanka Soomaaliya kala socdaan Khilaafka Soomaaliya iyo Kenya?
Xildhibaan Idiris “Kenya naguma qasbi karto in aan qol mugdi ah kula hadalno”